Aprôna → Akanjo fiasana • amboradara solosaina P&M matihanina
Aprons ho an'ny asa dia vokatra atokana ho an'ny hetsika amin'ny indostria isan-karazany. Izy io dia ampiasaina hiarovana akanjo amin'ny loto na ratra. Ny haben'izy ireo dia manerana izao rehetra izao, saingy azo ahitsy amin'ny tadiny.
Ankoatry ny vokatra azo ampiasaina dia manana aprons azo ampiasaina ihany koa izahay ao anaty fonosana 10 na 100, indrindra ampiasaina amin'ny gastronomia. Ao amin'ny magazay no ahitanao modely vita amin'ny karazana fitaovana isan-karazany toy ny landihazo mavesatra, polyester, rubber, polypropylene sy ny hafa, miankina amin'ny toerana alehany.
Ny fitaovana ampiasaina dia avo lenta ary manana fananana fanampiny raha toa ka aprons manam-pahaizana manokana. Ny ampahany lehibe aminy dia vita tamin'ny fitaovana mora sasana. Manome, ankoatra ny hafa, ny kosmetika, fikarakarana sakafo ary toeram-pamonoana omby.
Manolotra aprons koa izahay ao amin'ny sehatry ny akanjo misy aprons ankizy ho an'ireo tanora tia fanandramana mahandro sakafo.
Ny fanolorana apron ho an'ny asa dia misy:
ho an'ny gastronomy sy SPA,
vita amin'ny polypropylene / PE / PVC / Tyvek,
Gastronomy sy SPA
Ny aprons no be mpitia indrindra amin'ny tolotra fiarovana natokana ho an'ny indostrian'ny fikarakarana sy ny tarehy. Manolotra ireo antsoina hoe aprons koa izahay - aprons fohy. Ny akanjo dia vita amin'ny landy ary mifangaro amin'ny landy sy akora synthetic, ahafahana manala mora foana ny tasy amin'ny sakafo na kosmetika, ankoatry ny hafa. Ny lokon'ny lamba ampiasaina amin'ny aprons dia manampy famaranana milamina.
Amin'ireto indostria ireto, ny estetika sy ny sary dia manandanja indrindra satria ny mpiasa dia manana fifandraisana betsaka amin'ny mpanjifa - ny vokatray dia hahatonga azy ireo hahatsapa ho matihanina sy mahasalama. Safidy fanampiny amboradara ny sary famantarana dia hamela anao hisongadina amin'ny fifaninanana ary hifikitra tsara kokoa amin'ny fahatsiarovanao ny mpandray.
Fitaovana manohitra notapahana manokana
Kongo vita amin'ny metaly avo lenta anti-Hetezo natao indrindra ho an'ny indostrian'ny sakafo. Izy ireo dia ao anatin'ny fitaovan'ny mpiasa manao asa mifandraika amin'ny fampandehanana antsy iray mankany amin'ny vatana. Ny aprona dia vita amin'ny vy tsy misy fangarony avo lenta sy rafitra peratra vy misy savaivony 7 mm, mahafeno ny fepetra takiana amin'ny EN13998 (haavo 2). Ny fenitra dia ahafahana mampiasa amin'ny fepetra fikarakarana manokana. Ny fanoherana avo lenta an'ity fitaovana ity dia tsy ahafahana manindrona ny vatana.
Ny aprons dia mety amin'ny fiasa amin'ny rafitra HACCP. Izy ireo dia azo ampiasaina amin'ny fanodinana plastika sy hoditra, ary koa amin'ny fisarahana ny hena amin'ny taolana. Ny mpanamboatra dia nanao izay hahazoana antoka fa ny aprona, na eo aza ny fitaovany, dia hazavana araka izay azo atao ary tsy mametra ny fahalalahana mihetsika.
Aprons vita amin'ny polypropylene, PE, PVC ary tyvek dia natao ho an'ny toe-javatra izay misy akora mety hanimba ny fitafiana sy ny hoditra vokatry ny fifaneraserana amin'ireo fitaovana toy ny akora simika na ny zavatra mora mirehitra. Manolotra aprons amin'ny laboratoara vita amin'ny polypropylene miaraka amin'ny vozon'akanjo izahay hiarovana ny vozona, ary koa maodely vita amin'ny lamina PE microporous natao hiarovana rehefa miasa miaraka amin'ny akora manimba.
Anisan'ireo aprons miaro azy, misy koa ny apron PVC vita amin'ny rubber, ny mety indrindra amin'ny fiasana ao amin'ny fivarotana mpivaro-kena mba hikarakarana hena izay tsy mila antsy manondro ny vatana. Ny fihenjanana miaro ny akanjo dia azo antoka amin'ny alàlan'ny fitaovana mihosotra.
Manolotra apron izahay miasa orinasa malaza Leber & Hollman ary Reis. Ireo modely ananantsika amidy dia misy amin'ny tanany lava sy fohy. Ny satroka vita amin'ny fifangaroan'ny lamba polyester sy ny landihazo mavesatra dia asaina miasa any an-dakozia, izay aharetan'ireo akanjo amin'ny loto mavesatra sy matetika, izay kosa dia mila fanasana matetika amin'ny maripana ambony, eny hatramin'ny 95 degre Celsius aza, raha mitazona ny hatsaran'ny akanjo.
Ho fanampin'ny lakozia, ny aprona dia mety tsara amin'ny fiasana ao amin'ny trano fanatobiana entana, amin'ny famokarana, fivoriambe na amin'ny laboratoara. Ny endrika maoderina dia mamela fisehoana manintona, ary ny antsipiriany marina dia hanaporofoana fa ilaina ampiasaina mandritra ny fotoana maharitra.
aloro miasa apronsaprons fiasana fotsyaprona fiasan'ny vehivavyaprons miasaaprons miasa Allegrosavony asa vita amin'ny landihazoaprona fiasan'ny vehivavyaprons miasa ho an'ny vehivavy Allegroaprons miasa ho an'ny mpanadiomiasa aprons maciejaprons miasa ho an'ny lehilahyaprons hiasa ho an'ny lehilahy allegrompanamboatra aprona miasaaprons asa kantomiasa aprons wrocławakanjo fiaron-damban'efitra vehivavy